ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးအား မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ချက်သမ္မတနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Jaroslav Dolecek လာရောက်တွေ့ဆုံ
နေပြည်တော်၊ဇူလိုင် ၁၃ လူမှုဝန်ထမ်း၊ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးအား မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာချက်သမ္မတနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Jaroslav Dolecek က ယနေ့ညနေပိုင်းတွင်အဆိုပါဝန်ကြီးရုံးမေခလာခန်းမ၌
ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် about ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးအား မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ချက်သမ္မတနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Jaroslav Dolecek လာရောက်တွေ့ဆုံ
ထိုင်းနိုင်ငံမှပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသော လုပ်သားများကိုစနစ်တကျကြိုဆိုမှုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေး အားပေးကြည့်ရှု
နေပြည်တော်၊ဇူလိုင် ၁၂ လူမှုဝန်ထမ်း၊ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးနှင့်အဖွဲ့သည်ကရင်ပြည်နယ်၊မြ၀တီမြို့ရှိထိုင်းနိုင်ငံမှပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသောပြည်သူများကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလက်ခံရေးစခန်းသို့ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင်ရောက်ရှိကြပြီးကြိုဆိုလက်ခံရေးလုပ်ငန်းများကိုဌာနဆိုင်ရာများအလိုက်အဆင့်ဆင့်ဆောင်ရွက်ပေးနေပုံ၊ထိုင်းနိုင်ငံဘက်သို့တရားဝင်သွားရောက်ကြမည့် ပြည်သူများအတွက် ဌာနဆိုင်ရာများကလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပေးနေမှု၊တပ်မတော်နှင့်လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များ၏ပါဝင်ကူညီ ဆောင်ရွက်
ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် about ထိုင်းနိုင်ငံမှပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသော လုပ်သားများကိုစနစ်တကျကြိုဆိုမှုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေး အားပေးကြည့်ရှု
မိခင်ဝိုင်းများအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်းနှင့် ကလေးကစားစရာပစ္စည်းများပံ့ပိုးပေးခြင်း
နေပြည်တော်၊ဇူလိုင် ၁၂ ရခိုင်ပြည်နယ်လူမှုဝန်ထမ်းရုံးပြည်နယ်ဦးစီမှူး၏ဦးဆောင်မှုဖြင့်စစ်တွေမြို့နယ် အတွင်းတွင်ဖွင့်လှစ်ထားသောနာရီကန်ကျေးရွာရှိ မိခင်ဝိုင်း(၂)၀ိုင်း၊ ဆတ်ရိုးကျရပ်ကွက် (၁)ရှိ မိခင်ဝိုင်း(၁)၀ိုင်း ၊ ဆတ်ရိုးကျရပ်ကွက် (၂)ရှိမိခင်ဝိုင်း (၂)၀ိုင်းနှင့် စက်ရုံစုရပ် ကွက်တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသော မိခင်ဝိုင်း (၁)၀ိုင်း ၊ စုစုပေါင်း (၆)၀ိုင်းတို့အား (၁၂.၇.၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် ကွင်းဆင်းသွားရောက်ခဲ့ပြီး
ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် about မိခင်ဝိုင်းများအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်းနှင့် ကလေးကစားစရာပစ္စည်းများပံ့ပိုးပေးခြင်း
နေပြည်တော်၊ဇူလိုင် ၁၂ ရှမ်းပြည်နယ်လူမှုဝန်ထမ်းရုံး၊တောင်ကြီးမြို့မှ ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးနှင့်ဝန်ထမ်းများသည်၁၁.၇.၂၀၁၇ရက်နေ့တွင်ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)၊လင်းခေး ခရိုင်၊မောက်မယ်မြို့၊ကဒူးကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊နားဟီးကျေးရွာရှိ အိမ်ထောင်စု(၄၅)စု၊လူဦးရေစုစုပေါင်း(၂၀၉)ဦးမှတိုက်ပွဲရှောင်ပြည်သူလူထုအတွက်
ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် about တိုက်ပွဲရှောင်ပြည်သူလူထုအတွက် ကူညီထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများပေးအပ်ခြင်း
နေပြည်တော်၊ဇူလိုင် ၁၂ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလူမှုဝန်ထမ်းရုံးကွပ်ကဲမှုအောက်ရှိအမှတ်(၁)မူလတန်းကြိုကျောင်း၊မန္တလေးမြို့တွင်(၁၂.၇.၂၀၁၇) ရက်နေ့၊ နံနက် (၀၉း၃၀) နာရီ၌ သွေးလွန်တုပ်ကွေး အသိပညာပေးဟောပြောပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် about သွေးလွန်တုပ်ကွေးအသိပညာပေးဟောပြောပွဲကျင်းပခြင်း
ရှေးဦးအရွယ်ကလေးသူငယ်ပြုစုပျိုးထောင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ(ECCD) အခြေခံသင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း
နေပြည်တော် ၁၁.၇.၂၀၁၇ (၁၁.၇.၂၀၁၇)ရက်နေ့၊ နံနက်(၉:၀၀)နာရီအချိန်တွင် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၊ ပုသိမ်မူလတန်းကြိုကျောင်းစုဝေးခန်းမ၌ ရှေးဦးအရွယ်ကလေးသူငယ် ပြုစုပျိုးထောင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ(ECCD) အခြေခံသင်တန်းအား ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။
ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် about ရှေးဦးအရွယ်ကလေးသူငယ်ပြုစုပျိုးထောင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ(ECCD) အခြေခံသင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း
နှစ်(၇၀) မြောက် အာဇာနည်နေ့အကြို လှုပ်ရှားမှု သီချင်း၊ ကဗျာ၊ပုံပြင် ၊ပန်းချီပြိုင်ပွဲ ကျင်းပခြင်း
နေပြည်တော်၊ဇူလိုင် ၁၂ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး လူမှုဝန်ထမ်းရုံး ကွပ်ကဲမှုအောက်ရှိ အမှတ်(၁) မူလတန်းကြိုကျောင်းနှင့် အမှတ်(၂) မူထတန်းကြိုကျောင်း တို့တွင်
ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် about နှစ်(၇၀) မြောက် အာဇာနည်နေ့အကြို လှုပ်ရှားမှု သီချင်း၊ ကဗျာ၊ပုံပြင် ၊ပန်းချီပြိုင်ပွဲ ကျင်းပခြင်း
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အတွင်းရှိကလေးပြုစုရေးဌာနနှင့် မူလတန်းကြိုကျောင်းများ ဝါဆိုပန်းများဆက်ကပ်လှူဒါန်းခြင်း
နေပြည်တော်၊ဇူလိုင် ၁၂ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိမကွေးကလေးပြုစုရေးဌာနနှင့် ရေနံချောင်း၊ချောက်၊ပခုက္ကူ၊တရုတ်ကော၊ဆတ်သွား၊တောင်ပြင်(၂)၊မုဒိတာဥယျာဉ် မူလတန်းကြိုကျောင်းများ မှ ရင်သွေးငယ်များအား ၂၀၁၇ခုနှစ် ၊ဇူလိုင်လ(၁၉)ရက်နေ့တွင်ကျရောက်မည့် နှစ်(၇၀)မြောက် အာဇာနည်နေ့
ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် about မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အတွင်းရှိကလေးပြုစုရေးဌာနနှင့် မူလတန်းကြိုကျောင်းများ ဝါဆိုပန်းများဆက်ကပ်လှူဒါန်းခြင်း
နေပြည်တော်၊ဇူလိုင် ၁၂ (၇.၇.၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် ​​ညောင်​ဦးခရိုင်​လူမှုဝန်​ထမ်းရုံးနှင့်​ ပုဂံမူလတန်းကြို​ကျောင်းရှိရင်​​သွေးငယ်​​လေးများတို့မှသံဃာ​တော်​များအား
ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် about ဝါဆိုသင်္ကန်းဆပ်​ကပ်​လှူဒါန်း​​ခြင်း
ပြည်သူ့အကျိုးပြုစီမံကိန်းများရေးဆွဲရာတွင် သုတေသန ရလဒ်များကို အခြေခံရေး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးဆွေးနွေး
နေပြည်တော်၊ ဇူလိုင် ၁၀ လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးသည် ယနေ့နံနက်ပိုင်းက အဆိုပါဝန်ကြီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် EthicalReviewBoard ၏ ပထမဆုံးအကြိမ် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပါသည်။ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီး ဌာန၏ Research and Development Center ကိုဖွင့်လှစ်၍
ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် about ပြည်သူ့အကျိုးပြုစီမံကိန်းများရေးဆွဲရာတွင် သုတေသန ရလဒ်များကို အခြေခံရေး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးဆွေးနွေး